Ishiye kukhalwa imvula e-Ashdown | News24
Ishiye kukhalwa imvula e-Ashdown
AMALUNGA omphakathi wase-Ashdown athi izindlu zawo ziphenduke zaba ngamaxhaphozi okubhukuda ngoMsombuluko ebusuku ngenxa yezimvula ezinamandla ezidale umonakalo kulendawo.
Imizi eminingi kulendawo ingenelwe amanzi kanye nenhlabathi ebeyisuka emgwaqeni yangena ezindlini.
Imindeni ethinteke kakhulu kulezi zigameko ileyo ehlala emgwaqeni uDabulamanzi kanye no-ZJ Chonco.
Ngokuthola kwe-Echo ngawo amalunga omphakathi bekungakona okokuqala ukuthi imvula ishiye idale umonakalo ezindlini zabantu.
Umphakathi usugxeke izitamukoko zasemgwaqeni ezingasebenzi njengembangela eyenza ukuthi amanzi ageleze ahambe ayongena emzini yabo kube izikhukhula.
Bathe sekukaningi bebika lenkinga kuMasipala uMsunduzi ukuthi bacela ukulungiselwa ukuze amanzi ezohamba kahle kodwa akwenzweki.
UNkk Busisiwe Ngcobo (66) uthe yena usebhekane nalenkinga kusuka ngonyaka wezi-2012. Uthe njalo uma kuthwasa ihlobo bayazi ukuth bazoba nenkinga yokungenelwa amanzi endlini.
Uthe ngoMsombuluko bebeme ngezinyawo ubusuku bonke bezama ukukhipha amanzi endlini kodwa kwanhlanga zimuka nomoya njengoba bekumanzi yonke into.
“Besisazihlalele sibuka umabonakude ngesikhathi sizwa amanzi abeza ngamandla esuka phezulu emgwaqeni sawabona esezongena endlini. Lawo manzi abengahambi wodwa kodwa abehambisana nendle ebeyikhukhuleka iphuma kulezi zitamukoko ezingasebenzi. Bekukhona ngisho inhlabathi ebeyisuka emgwaqeni lapho umasipala wafika wamba khona umgodi omkhului esingawazi waqede washiya kanjalo,” kubeka yena.
Uthe lo mgodi lowo wambiwa ngenyanga kaNhlaba (May) kuze kube imanje ubungenziwa lutho washiywa uvulekile kanjalo.
“Kumosheke yonke impahla esendlini ngisho izincwadi zeszigane zesikole nazo zimanzi azikwazanga ngisho ukuya esikoleni. Ezinye izimpahla ebezikhona endlini okubalwa khona izimpahla zokugqoka zona zivele zaphuma zamuka namanzi ngendlela ebekukubi ngayo amanzi engena ngisho nangamawindi.
“Asazi ukuthi kumele size senze jani ukuze umasipala wethu uzosukuma usisize. Isigcino sizowelwa izindlu siphakathi ngenxa yalamanzi ahleli engena phakathi. Sesaze sabhoboza ngisho imbobo kwamanye amagumbi endlini senzela ukuthi uma ngabe sekungene amanzi akwazi ukuphuma ngembobo ukunciphisa umsebenzi wokuloku siwakhipha,” kubeka yena.
Ngesikhathi i-Echo ifika kulendawo umgwaqo ubuvalwe inhlabathi kanye namanye okuthiwa asuka emgodini phezulu, kanti emzini wakaNgcobo khona amalunga om ndnei abesamatasa esazama ukukhipha amanzi kanye nenhlabathi endlini.
UMnu Nkosi Ngubane naye othintekile ngalesi sigameko uthe kukona konke loku okwenzekayo basola ubudedengu bukamasipala.
“Ukube bazilungisa lezi zitamukoko kusanesikhathi angabe asibhekene nalenkinga esibhekene nayo njengamanje. Uma ngabe kungukuthi kuyabahlula ukulungisa zona kumele bafake udonga oluzovimba amanzi ke ukuthi ageleze ahambe ayongena emzini yabantu. Sesikhathela manje ukuphila kanje asazi ukuthi kanti sekumele senze njani ukuze silalelwe nathi,” kubeka yena.
Wonke amanzi asuka phezulu emgwaqeni uDabulamanzi aqala ezindlini ezikulowomgwaqo bese adlulele kwezingemuva emgwaqeni u-ZJ Chonco.
Ikhansela lakulendawo uMu Dumisani Phungula uvumile ukuthi kukhona inkkinga ngezitamukoko kule ndawo kodwa wathi akuyona inkinga yomgwaqo owodwa kopdwa inkina yendawo yonke yase-Ashdown .
Uvumile futhi ukuthi emgwaqeni uDabula kunenkinga yesitamukoko esivalakile esingasebenzi.
“Sengilubikile udaba emntynawnei ofanele kamasipala ukuze bezokwazi ukuthi balungise lapho kuvalekele khona.
“Kodwa inkinga enkulu esibhekene nayo ukuthi izitamukoko esinazo vele endaweni yethu azinawo amandla afanele ukuthi zingamelana nezikhukhukhula nokube sekuholela ekutheni amanzi ahambe ayongena emzini yabantu. Lena inkinga ebehekene nendawo yonke,” kubeka yena.
Uthe loku kwavezwa ucwaningo olwenziwa eminyakeni emihlanu eyedlule. Uthe kudingeka ukuba kukhushulweizinga lezitamukoko kule ndawo.
Ephawula godaba lomgodi uthe naye akahambisani nokuthi kushiywe umgodi ombiwe isikhathi eside kangaka kungenziwa lutho kodwa wathi uselubikile udaba kamasipala.
“Siyanxusa nomphakathi ukuthi izinkinga ezifana nokuvaleke akwezitamukoko uzibike kusanesikhathi kungaze kwenzeke umonakalo.”